Turkiga oo Soomaaliya siiyay ku dhawaad 450 xabo oo qorigiisa casriga ah ee MPT-76 - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaTurkiga oo Soomaaliya siiyay ku dhawaad 450 xabo oo qorigiisa casriga ah ee MPT-76
November 1, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Sawirka: Qoriga MPT-76 soo lagu sameeyay gudaha dalka Turkiga.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Turkiga ayaa siiyay Soomaaliya qorigiisa casriga ah ee MPT-76 kaasoo dhawaan lagu sameeyay gudaha dalka Turkiga, sida ay ku warantay wakaalada wararka dowladda Turkiga ee Anadolu oo soo xiganaysa ilo-wareedyo katirsan waaxda difaaca Turkiga.
Ku dhawaad 450 qori oo MPT-76 ayaa lagu wareejiyay Soomaaliya si ay u kula dagaalamaan maleeshiyada Al-Shabaab.
Qoriga ayaa gaari kara 600 mitir, isaga oo otomaatig ah toos ah u shaqeyn kara, waxaana uu wataa muraayadda aragga ee habeenkii oo lagu rakibi karo ama laga saari karo.
July 7, 2016 Xanuunka beerka oo noqday hoggaamiyaha xanuunada dilaaga aduunka
October 12, 2017 Wasaaradda Maaliyada Puntland oo lacag been abuur ah ku gubtay Boosaaso
Ciidamada Itoobiya oo ku soo noqday dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab